China HSL-YTJ2621 Fitaovana miendrika fitaratra fitaratra automatique mpanamboatra sy mpamatsy | Huashili
Functions Fampiasana mahazatra Rindrambaiko fanatsarana fanapahana 1.Fanapahana fitaratra matihanina sy fiasa fanamafisam-peo nohavaozina: manatsara be ny tahan'ny fanapahana fitaratra sy ny fahombiazan'ny famokarana.
2.Mifanaraka amina rindrambaiko OPTIMA novaina optimita sy kaody G standard an'ny rindrambaiko GUIYOU ao an-toerana: Fantaro ny maha-universal ny fisie fisie samihafa.
Diagnostika 3.Fault sy ny fiasan'ny fanairana: Afaka mirakitra an-tariby ny fizotran'ny milina amin'ny fizotry ny famokarana, ny fanairana diso ary ny fisehoan'ny olana.
Fametrahana laser amin'ny fibre
1. Fitadiavana an-tsisiny ary fametrahana ny fitaratra: ny fandrefesana mazava ny tena toerana misy azy sy ny zoro mihodina amin'ny fitaratra, mahatsapa ny fanitsiana mandeha ho azy ny lalan'ny fanapahana ny elatra, ary manatsara ny fahombiazany
2. Fampandehanana an-tsaina manan-tsaina: ny detector dia afaka mamaky tsara ireo zavatra miendrika ary mamorona sary ho azy mba hahitana ny fanapahana ny volony.
Fiasa tsy voatery Fiasan'ny sandan'ny teleskopika Ny pinion avo lenta sy ny kapila matevina dia raisina hanolo ny visy fihodinana tany am-boalohany, isaky ny vita ny hetsika telescopic arm, dia tsy mila mihetsika ilay masinina.
Izy io dia azo fehezin'ny solosaina mitokana, ary ny famoahana sy ny fanapahana mandeha ho azy dia azo tanterahana tsy misy fitsabahan'ny tanana, izay manatsara be ny fahombiazany;
Noho ny fihenan'ny isan'ny diabe dia mihena be ny akanjo mekanika ary mihatsara ny fiainana sy ny fitoniana ao amin'ilay masinina.
Famaritana mandeha ho azy Soloy ny fanoratana amin'ny tanana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny mpanonta printy dia manao pirinty labels izay mirakitra ny vaovao fitaratra.
Ny labozia dia apetaka amin'ny vatan'ny vera mifanaraka amin'ny varingarin'ilay marika.
(Manoro hevitra ny mpanjifa izahay mba hikirakira ny asan'ny fanoratana)
Fandraisan'anjara fitaratra Apetraho eo amin'ny sehatra fanapahana ny tsorakazo ejector.
Ny varingarina dia manosika ny tsorakazo ejector hanapaka ny vera.
TransportToetoetra Ny paingotra fanapahana dia miaraka amin'ny mpaneloka mpampita. Tsy ilaina ny mamindra ny vera amin'ny tanana.
Ny vera voapaika dia azo afindra amin'ny latabatra famakiana vera mitsingevana amin'ny alàlan'ny mpampinono, ary ny fandidiana fanapahana dia atao eo ambony latabatra fitaratra fitaratra.
Sokajy TETIKASA Torolàlana momba ny tetikasa Fanamarihana
Fametrahana ny vokatra Ampahany mekanika Masininafilanjana Fitsaboana fahanterana aorian'ny fikolokoloana ny faritra matevina kokoa. Ny takelaka manamboatra vitrana dia ahodina amin'ny fikosoham-bolo mba hahazoana antoka fa marina sy marin-toerana.
Taratra fisaka X-axis sy Y-axis mihazakazaka tara-pahazavana dia manana mombamomba ny firaka aliminioma misy patanty tsy manam-paharoa, izay manana tanjaka avo sy avo lenta ary maharitra sy mateza.
fitoeran'entana Ny fananganana talantalana helika sy rafitra pinion hanatsarana ny tanjaky ny nify ary hampihena ny tabataba amin'ny fomba mahomby
Famatsiana solika Ny famatsian-tsolika ny fanapahana fanapahana dia mampiasa ny fomba famenoana menaka mandeha ho azy, tsy misy fidiran'ny tanana.
Fan Fanamafisam-pahefana mahery namboarina, tsindry avy amin'ny rivotra mahery ary mikoriana lehibe, manome toky fa hisosa fitaratra milamina.
Motera mitondra fiara 2 mametraka maotera servo avo lenta avo lenta ho an'ny fanaraha-maso marina sy fandidiana milamina.
Mesa Ny birao tsy misy rano matevina avo lenta dia substrate, ary ny atiny dia rakotra fahatsapana indostrialy fanoherana ny static. Ataovy azo antoka ny fampiasana azo antoka amin'ny tontolo mando.
Fitaovana elektrika Solosaina fampiantranoana Mpampiantrano solosaina avo lenta amin'ny fanaraha-maso indostrialy; fisehoana vahaolana avo lenta.
-maso Huashil karatra fanaraha-maso manokana, rafitra fanaraha-maso Toshiba PLC mifanentana.
Fibre optika Mampiasa detector laser Panasonic nafarana avy any Japon.
singa Ny singa fanaraha-maso marika iraisampirenena voalohany nampidirina toy ny OMRON, Panasonic.
Parameter teknika Masinera masontsivana lafiny Halavany * sakany * hahavony: 3000mm * 4700mm * 1420mm
Ny haavon'ny latabatra 880 ± 30mm (tongotra azo ovaina）
Fepetra takiana 3P ， 380V ， 50Hz
Hery napetraka 13kW （Mampiasà hery3KW）
Rivotra voafintina 0.6Mpa
Masontsivana fanodinana Hetezo ny haben'ny vera MAX.2440 * 2000mm
Hetezo ny hatevin'ny vera 2 ~ 19mm
Hafaingan'ny lohany X axis 0 ～ 200m / min (azo apetraka)
Haingam-pandeha Y axis 0 ～ 200m / min (azo apetraka)
Fanapahana haingana ≥6m / s²
Fanapahana antsy Ny loha manapaka dia afaka mihodina degre 360 ​​(fanapahana tsipika mahitsy sy endrika manokana)
Fahamarinana fanapahana ≤ ± 0.2mm / m （Miorina amin'ny haben'ny tsipika fanapahana alohan'ny vaky fitaratra）
Nâme Marika Firenena endri-javatra Fanamarihana
Rindrambaiko fanatsarana Guiyou Shina
Rindrambaiko fanapahana Weihong Shina Fahamarinana azo antoka
Ligne toradroa Mandresy TAÏWAN
Fitaovana elektrika AirTAC TAÏWAN
Valizy Solenoid AirTAC TAÏWAN
Fanoloana herinaratra Omrona Japana
Encoder Omrona Japana
Antsy manapaka Bohle Alemaina
Tsipika malefaka avo Kangerde Shina
Windpipe Sun Rise TAÏWAN
Môtô servisy axis XX DEAOUR Shina 1.8KW * 2 Intel chips
Motera servi Y axis DEAOUR Shina 2.2KW
Motera mandeha EKP Shina 1kw
Rafitra fanaraha-maso Toshiba Japana
Fifandraisana Schneider Frantsa
Inverter JRACDRIVE Shina
mpandika AirTAC TAÏWAN
Fihetseham-po lehibe NSK Japana
Relay mpanelanelana AirTAC TAÏWAN
Fitaovana fampidinana rivotra Fanamboarana Shina Fanamboarana 3KW
Fanamoriana akaiky Omrona Japana
Scanner Fitetezana PANASONIC Japana
Rafitra fanaraha-maso diso HUASHIL Shina
Fitaovana mihantona Mandresy TAÏWAN
Fanamarihana：Noho ny fanatsarana hatrany ny fitaovana dia hovaina ny antsipiriany sasany, ary ny mpiasan'ny orinasa mpanolotsaina dia hanjaka amin'ny maodely farany indrindra.
Teo aloha: Masinina fanapahana fitaratra mandeha ho azy HSL-CNC3826
Manaraka: HSL-YTJ3826 Milina fanapahana fitaratra automatique + Latabatra famakiana vera HSL-BPT3826
Vidin'ny milina fanapahana fitaratra mandeha ho azy
Masinina fanapahana fitaratra vita amin'ny vera
Masinina fanapahana fitaratra Cnc mandeha ho azy
Milina fanoratana sy fanapahana mandeha ho azy